Gbasara Anyị | Future valvụ Ball Co., Ltd.
Ọdịnihu valvụ bọl CO., LTD.
Future valvụ Ball Co., Ltd., nke e guzobere na 2004, nke dị na obodo valvụ a ma ama nke Wenzhou, Province Zhejiang. Anyị nwere ọtụtụ ihe dị ịrịba ama na-amị na exporting elu mma bọọlụ & oche maka bọl valves.
Nnọgidesi ike na iche iche na-eme ka anyị bụrụ ụlọ ọrụ a kwadebere nke ọma ma jikwaa ya. Anyị nwere ihe karịrị 100 ndị ọrụ na 20 agadi oru pesonel. Site na mgbalị nke ndị ọrụ ibe anyị, enyerela anyị ikikere maka sistemụ ISO9001-2015.
Nzukọ a, na-ekpuchi mpaghara nke 8000㎡ ， nwere ihe dị ka ụdị 100 nke ụdị ngwá ọrụ dị elu, gụnyere CNC vetikal lathes, ogige igwe na ihe ndị ọzọ, ụlọ nyocha nwere ihe gbasara 50 nyocha nke ngwaọrụ nyocha, gụnyere nhazi nhazi atọ. , obere ụdịdị dị iche iche nyocha na wdg,
Anyị nwere ike ịmepụta bọọlụ ahaziri dịka eserese ndị ahịa. Ngwaahịa ndị a gụnyere: bọọlụ trunnion, bọọlụ na-ese n'elu mmiri, bọọlụ bọọlụ, bọọlụ T-type / L-ụdị 3 na ụzọ efere bọl na igwe;
Isi ihe gụnyere: carbon carbon, steel steel, cryogenic steel, na alloy pụrụ iche. Dị ka A105, LF2, 410, F6A, 4130, 4140, F304 (L), F316 (L), 17-4PH, F51, F53, F55, Inconel625, Incoloy825, monel series, Hastelloy na wdg.
Advanced akụrụngwa, magburu onwe management, ọgaranya ahụmahụ mkpara, na-enwu gbaa atụ, enyere anyị aka iji obi ike na-eje ozi maka bọl valvụ rụpụta ulo oru gburugburu ụwa.
Anyị raara onwe anyị nye ka ị nweta ọnụahịa ka mma, mma ka mma, oge nnyefe ka mma, ọrụ ka mma.
Na-atụ anya ezi ọrụ ime mmụọ gị n'oge na-adịghị anya!